ဆန်ပင်ပေါက် ကြက်တောင်ပံဆန်ပြုပ် ~ စန္ဒကူး
အဆန်းလေးနော်...။ မြည်းကြည့်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ အစ်မကူးကူး ချက်ထားတာလေးပဲ စားချင်တယ်း) ဒီနေ့ ဧပြီ ၁၀ ရက်က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် မွေးနေ့လား။ အစ်မကူးကူးက စိုင်းစိုင်း Fan လားပာင်။
ဟယ် .. မိုက်တယ်ကွ ...
စားရတာတွေ ကြိုက်တယ် .. :D
Interesting!I'll try it.Tks for sharing.
သေချာလုပ်စားကြည့်အုန်းမယ် အမက ဆန်ပြုတ်အရမ်းကြိုက်တာ ကျေးဇူး
ဆန်ပြုတ်လေး အိနေတာပဲဆိုတော့ စိတ်တော့ဝင်စားတယ်။ အားရင် လုပ်စားမယ်။ ဆန်ဝယ်လို့ရလား ကြည့်ရဦးမယ်။
I am not saying your content isn't solid, however suppose you added something that makes people want more? I mean "ဆန်ပင်ပေါက် ကြက်တောင်ပံဆန်ပြုပ်" is kinda boring. You might glance at Yahoo's front page and see how they create post headlines to
video orapicture or two to grab readers excited about everything've written. Just my opinion, it might make your postsalittle bit more interesting.
Here is my website ford ranger